मजदुर दिवशमा फेसबुकको भित्तामा कसले के लेखे ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, विशेष, समचार, समाचारहरु → मजदुर दिवशमा फेसबुकको भित्तामा कसले के लेखे ?
मजदुर दिवशमा फेसबुकको भित्तामा कसले के लेखे ?
May 1, 2016४२७ पटक
बैसाख १९ । आज १२७ औ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस । विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध मजदुर संगठनहरुले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दे मे १ मनाउन लागेका हुन् । ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरुले गरेको संघर्षको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । ७ औं शताब्दीमा भएको संघर्षले मजदुरहरुले यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए । सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिएको हो । नेपालमा सन् १९६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइदै आइएको छ। तर यस दिनलाई विसं २०६४ बाट मात्र आधिकारिक विदाको रूपमा घोषणा गरिएको हो । मनाइदै आइएको छ । तर यस दिनलाई विसं २०६४ बाट मात्र आधिकारिक विदाको रूपमा घोषणा गरिएको हो । आज मजदुर दिवस भएकाले पनि फेसबुकका भित्ताहरुमा मजदुर दिवसका शुभकामना छरपष्ट रुपमा देखिएका छन् ।
महिला अधिकार कर्मी सरु सुनार फेसबुकमा यस्तो लेख्छिन –
“अन्तरास्ट्रिय मजदुर दिबश ( may-1)
आज झन्डा, ब्यानर र कार्यक्रम श्रमको बिशेष अधिकारको लागि नारा बाजि चलिराछ। यहाँ नेपाली नारीलाई श्रम होइन शरीरको अधिकार चाहिएको छ।
खुलेर बाच्न पाउने अधिकार चाहिएको छ। आफ्नो अस्मिता बचाउने अधिकार चाहिएको छ । स्वतन्त्र हिड्न पाउने अधिकार चाहिएको छ?
कसले दिने हामीलाई यो अधिकार ?
आज नै काठमाडौ दलित महिला( परियार थरकि) बलात्कृत भएकी छिन।”
उता पत्रकार बसन्त बिश्वकर्मा भन्छन –
“खुल्ला अाकास मुनि रगत पसिना बागउने हरुले श्रम बेचि रहेका छन । अध्यारो रातमा शरिर बेच्नेहरुले त्यही श्रमको मुल्य चुक्ता गर्छन । अध्याराेमा शरिर बेच्नेकाे सम्मानित र उज्यालोमा श्रम बेच्ने अपमानित हुने हाम्रो देशमा …………मजदुर दिबसको शुभकामना सबैमा”
नरेश रेग्मी फेसबुकको स्टाटशमा लेख्नुहुन्छ “म दावाका साथ भन्न सक्छु आजको दिन पनि देशका ९५ ५ मजदुरहरु आफ्नो दैनिक तालिका अनुसार मजदुरी गर्दैछन। म यो पनि दावाका साथ भन्न सक्छु आज मजदुर दिवसको दिनमा सार्वजनिक बिदाको रस स्वादन गरिरहेकाहरु मध्य ९० ५ मजदुर होइनन । यो कुराको त झन ग्यारेन्टी नै दिन सकिन्छ कि आज मजदुर दिवस हो भन्ने थाहा पाउनेहरु मध्य ९०५ लाई मजदुर दिवसको ईतिहास थाहा छैन। कति लाई त मे डे र मजदुर दिवस एउटै हो भन्ने हेक्का नहुन सक्छ। अलि अलि १००-१५००, जो सडकमा उपस्थित छन ती मध्य अधिकांस नवधनाड्य मालिक बन्नको लागि लालायित भएर कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेकाहरु छन। त्यसैले द्विविधामा छु कि मजदुर दिवसको शुभकामना कसलाई दिउँरु म जसलाई मजदुर दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु ती मध्य ९०५ ले फेसबुक चलाउँदैनन। “
अर्का युवा दिनेश सारु फेसबुकको भित्तामा यसो लेख्नुहुन्छ “एउटै प्रकृतिको श्रमको मुल्य आफ्नै देश र परदेशमा जुन दिन हाराहारिमा या अरु भन्दा माथि पुग्छ त्यो दिन फ्रि भिसा हैन टुरिस्ट भिसामा परदेश जान पाईन्छ। आफ्नो देशको छ अंके श्रम(मुल्य भन्दा परदेशको ट अंके मुल्यको लागी नै श्रम शक्ती बाहिरीने हो। श्रमको उचित मुल्य आफ्नै घरआँगनमै प्राप्त गर्ने दिन चाडै ल्याउन पाईयोस”
दिनेश राज आचार्य यस लेखलाई आफ्नो फेसबुकमा मजदुर दिवश बिषेश बनाएका छन :- ‘ पसिना बगाउनुस्, मजदुर हुनुस्, तर गलत कामका लागि मजबुर कहिल्यै नहुनुस् । सबै मजदुरलाई “मे दिवसको” शुभकामना ! “
रमेश लाम्गादे बिश्वकर्मा रीयाद बाट यस्तो लेख्छन- “नमस्कार सम्पुर्ण मा साउदी अरेबिया बाट आज (May-1)विश्व मजदुर दिबस सबै मजदुरहरुको यो अमूल्य र अतुलनिय समयको कदर होस यी ४०/५० डिग्री चर्को घाममा काम गर्दै बगाइ रहेको अमुल्य पसिना को कदर होस विश्वभरका हामी मजदुर एक हौँ मजदुरको हक हितमा आबज उठाउ स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन दबाब दिउँ भन्दै सोसन दमन हत्या हीम्सा बलात्कार अन्याय अत्याचार जातीय भेदभाव छुवाछुत जस्ता अमानबीय बेवाहार का बीरुद्द मा सम्पुर्ण मजदुरहरु एक भै बुलन्द आवाज का साथ आफ्नो हक अधीकार को लागी हटेर हैन डटेर लड्ने साहास पैदा होस एकता को मालामा आवद्ध हुदै अगाडी बडौ सम्पुर्ण विश्वका मजदुरहरुलाइ मजदुर दिबश को शुभकामना ब्यक्त गर्दछु। “
यु ए ई बाट लेखक भिम खनाल भने यस्तो लेख्छन- “दैनिक ३६ लाख नेपाली मजदुर सस्ताे मूल्य मा श्रम बेच्न बाध्य रहेकाे तथ्याङ्कले देखाउछ बर्षमा सरदर ४०० मजदुर खाडि अरब बाट मात्रै बाक्सामा प्याक भयर फर्कने रहेछन काेरिया तिर खाेरिया खन्ने हरु मानसिक तनाब सङ्गै अात्महत्या काे क्रम बढिरहेकाे तथ्याङ्क ले उल्लेख गरेकाे छ मुलुक मा भए जति उधाेग हरु मजदुर सङ्गठन काे नाम मा राजनैतिक अातङ्क ले दफा भएका छन 2046 काे अान्दाेलन पछि मुलुक भर सञ्चालित १३० ठुला मझाैला उधाेग हरु बन्द हुनुका साथै १५६ राजनैतिक पार्टि हरु दर्ता भएकाे तथ्याङ्कले देखाउछ अब सुभकामना कसलाई दिने हाे ?”
राजनितिक दलहरुले आफ्ना सैदान्तिक रुपमा किसान मजदुरको बारेमा थुप्रै कुरा गरे पनि त्यो ब्यबाहारमा उतारेको पाइदैन उनिहरुले किसान मजदुरहरुलाइ भोट ब्याङ्कका रुपमा प्रयोग गरे यदि साच्चै राजनितिक दलले नै भने जस्तो हामी जनताका पार्टी हौ किसान मजदुरका पार्टी हौ भनेर जति सुकै दाबी गरेपनी ती किसानको जीवन ब्यबाहामा के कति परिबर्तन आयो? रातदिन भारि बोक्ने भरिया दाइ र नदि किनारमा बालुवा चाल्ने दाइको जिबनमा के कति फेरबदल भयो त यस्को जवाफ राजनितिक दलले दिन सक्नुपर्छ आजको दिनमा..